Hogaamintii xisbiga oo Qarka u saaran inay Jaha cusub u wareegto. – Xeernews24
Aqoonyahano siyaasiyiin iyo xeel dheerayaal magac iyo miisaan ba kudhex leh bulshada ree DDS ayaa saacadihii ugu dambeeyay kusoo biiray ciyaartii Horay ugu dhaxaysay madaxwayne Mustafe iyo Gudomiye Axmed Shide.
Kooxdan oo aan siyaasada ku cusbayn ayaa waxaa Hogaanka u Haya wasiiru dawlaha Tacliinta sare ee Itobiya Dr. Wasac Cabdullahi Bade, waxaana xubno ka ah Dr. Cabdifatax iyo Drs. Saxarla oo Labaduba ah Aqonyahano si aada ula socda siyaasada deegaanka.
Ma’aha oo kaliya 3-dan xubnood balse waxaa xertan cusub oo lamagac baxday isbadal doonka xisbiga Qayb ka ah inta badan xubnaha cusub ee xisbiga, waxayna isbadal doonku in muda ah Hawshooda xisbiga uga dhex wateen si Hoose oo Qunyar socodnima ah.
Masuuliyiinta is badal doonka oo shalay uun soo Gaadhay magalada Jigjiga ayaa durba saamayn balaadhan kuyeeshay Jihada cusub ee siyaasada xisbiga loo dhaqaajinayo, waxaana inta badan wakhtigooda ay kuqaateen sidii ay kulamo ula Yeelan lahaayeen Ergoyinka shirwaynaha kaqayb galaya, kuwaasi oo ay doonayaan inay u Gudbiyaan siyaasadooda kusalaysan dhiig cusub Galinta xisbigii CabdiIley Faasidka uu ahaa ee dad iyo duunyaba cagta mariyay.
Golaha isbadal doonka xisbiga ayaa Qorshahoodu yahay inay kaga Takhalusaan Axmed Shide iyo Mustaf oo tan iyo bilawgii shaqadooda uu u dhexeeyay dagaal curyaamiyay Guud ahaan Hanaankii dawladnimo ee deegaanka, waxaana Jirta Rajo iyo Ifafaalo wanaagsan oo muujinaya in Isbadal doonka xisbigu si fudud ula wareegaan Hogaanka xisbiga, maadaama Mustafna uusan ba xisbiga kujirin Axmed Shidena uusan wax Taageero iyo sumcad ah xisbiga bulshada Toona kudhex lahayn lagana urin Cabdi Iley oo uu gacan yare u ahaa
XOG XASAASI AH: Villa Soomaalia oo Gudbisay Dacwad ka dhan Safarkii Muuse Biixi... Mamulka madaxwayne Mustafe Cagjar maxaa ka Khaldan?